Dowladda Maraykanka (USA): “Waa in si degdeg ah loo qabto doorashada Soomaaliya” – Radio Daljir
Dowladda Maraykanka (USA): “Waa in si degdeg ah loo qabto doorashada Soomaaliya”
Maarso 19, 2021 5:38 g 0
Warsaxaafadeed ka soo baxay hawlgalka Dowlada Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Maraykanku aad uga walaacsanyahay cakirnaanta doorashooyinka Soomaaliya taasoo abuuraysa deganaansho la’aan siyaasadeed Islamarkaana halis ku ah Amaanka, xasiloonida iyo Horumarka dalka.
“Waxaan ugu baaqeynaa madaxda Dawlada federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay dhinac iska dhigaan ujeeddooyinka siyaasadeed ee gaarka ah, ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran dadka Soomaaliyeed, oo ay oggolaadaan in si deg deg ah loo qabto doorasho hufan oo loo dhan yahay.” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedka ay soosaartay safaarada Maraykanka ee Soomaaliya.
Warsaxaafadeedka Maraykanka oo sii socda ayaa lagu sheegay in Caqabadaha hada jiraa ay wiiqayaan horumarka la sameeyay ilaa hadda, oo ay kamid tahay dib u dhac ku yimaada dib u habaynta dhaqaale ee dalka oo si degdeg ah loogu baahan yahay si Soomaaliya ay ugu sii socoto wadada loo marayo dayn cafinta oo dhameystiran, carqalada jirta ayaa sidoo kale la sheegay inay caqabad ku tahay la dagaalanka Argagixisada.
“Mareykanku wuxuu taageerayaa xuquuqda muwaaddiniinta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay u mudaaharaadaan si nabad ah wuxuuna si adag ugasoo horjeedaa adeegsiga rabshadaha ee koox kasta.” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Maraykanka.
“Waxaan ugu baaqaynaa Hogaamiyayaasha Soomaalida inay badbaadiyaan mustaqbalka dalka ayna degdeg ugu heshiiyaan qabsoomida doorashada baarlamaanka & tan Madaxtooyada ee dalka,” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedka Dawlada Maraykanka.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 499 Wararka 25327
NUSOJ: “Iska diid xukunta ceebta ah ee Maxkamada Ciidanku ku riddey wariye madaxbannaan” (Warsaxaafadeed)
BADHAN: DHAGAXDHIG & DIB-U-HABAYN SALDHIGGA BOOLISKA (daawo)